Home > safarka Europe > Waa Maxay daaraha ugu quruxda badan ee Europe
Waxaa la ballaariyey by taliye Faransiis caanka ah Louis XIV, dhaqaajiyey labada maxkamadda iyo dowladda si Versailles ee 1682. Chateau waxay ahayd meel dhexe ee awoodda France ilaa Revolution ee 1789. Haddaba waxaa mid ka mid ah meelaha dalxiiska ugu caansan dunida oo dhan.
dhismaha ayaa waxaa marka hore loo isticmaalaa sida hall magaalada ka dib markii la dhisay 1572. In 1817, waxa ay noqotay joogitaanka rasmiga ah ee Guddoomiyaha. The Grand Ducal Palace muuqataa waari ee style Vlaamse Renaissance iyo in uu yahay mid ka mid ah sababta ay tahay liiska ugu jirto daarahaaga dhaadheer Beautiful in Europe our. Waxay leedahay mid ka mid ah guriyo ugu quruxda badan ee magaalada, iyo sidoo kale gudaha u qurux badan.
Mid ka mid ah indhaha iyo daaraha waaweyn Fiican Yurub inta badan soo booqday waa in Vienna, Austria, Schonbrunn sidoo kale goobta Heritage Dhaqanka Adduunka. madaxtooyada ayaa ku bilaabatay sidii buul ugaarsiga for Emperor Leopold waxaan a. Waxaa la dhisay qarnigii 17-. Schonbrunn waa mid ka mid ah shuqulladii ugu fiican ee naqshadeeyaha ugu Bernhard Fischer von Erlach.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-palaces-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)